Izinkomba zomuntu ngamunye kanye nokuphikisana nomsebenzi womzimba
Ukuvakashelwa kwamakilabhu okuzivocavoca kanye nezigaba zezemidlalo namuhla kuye kwaba yisici esibalulekile sokuphila kwabesifazane banamuhla. Kwabanye abameleli bobulili obuhle, imithwalo ehleliwe eyatholakala ngesikhathi sokuqeqeshwa inconywa odokotela kanye nochwepheshe emkhakheni we-valeology (isayensi yempilo enempilo). Kwabanye besifazane, odokotela abafanayo bayeluleka ukukhawulela umsebenzi ongokwenyama ngangokunokwenzeka. Izincomo zabasebenzi bezokwelapha zixhomeke kuphi? Yiziphi izinkomba kanye nokuphikisana komuntu okwenziwe ngokomzimba?
Ngakho-ke, ake siqale sicabangele izindlela ongakhetha kuzo lapho kuboniswa khona imithwalo yemvelo. Kumele kuqashelwe ukuthi izinkomba zokuqeqeshwa ngokomzimba nezemidlalo zizodwa. Nokho, noma kunjalo, kungenzeka ukuthi uhlukanise izindlela ezivame kakhulu ezithatha izincomo zokwandisa umsebenzi wezimoto nokuzikhandla ngokomzimba emzimbeni. Inkinga evamile kakhulu yezibonakaliso zokuzikhandla komzimba kwabesifazane kuyoba khona ukulingana ngokweqile. Uma wenza umzimba uma uvakashela ukuqeqeshwa, umzimba udla amandla amaningi, futhi ngenxa yokukhiqizwa kwawo, kusetshenziselwa amafutha okugcoba. Ngokuvamile ukuchitha amangqamuzana amaningi omzimba ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba, ngokuzivocavoca ngalunye okulandelwayo umzimba ukhululiwe emanzini amancane esisindo esiningi. Futhi uma uhlelo lwakho lokuqeqesha olulodwa lugcinwa ngokucophelela njalo ngesonto, ngokushesha ukulahlekelwa kwamakhilogremu engeziwe kuzobonakala kakhulu.
Esinye isibonakaliso sokusebenza ngokomzimba "umsebenzi wokuhlala" noma ukuphila ngokwemvelo ngokuvamile. Ukunciphisa umsebenzi wezimoto kubangele ukuphazanyiswa cishe kuzo zonke izinhlelo zomzimba womuntu futhi kuholele ekwenzeni ukuhlaselwa kwenhlalakahle. Ukuhlala kwansuku zonke esikhwameni sokusebenza kwamahora amaningana kunzima kakhulu ukusebenza komzimba we-cardiovascular and process circulatory, kubangela ukuwohloka kwezokuthutha oksijini kuma cell of various tissues. Umthwalo ngokomzimba otholakale ngesikhathi sokuqeqesha emaceleni ezemidlalo nakwamanye amaqembu empilo noma emisebenzini yokwenza ngcono impilo, ikuvumela ukuthi uqede zonke izimpawu ezingekho emthethweni zokuphila komuntu ohlala phansi. Izimpawu zokuzivocavoca yizincomo ezinhle kakhulu zokuvimbela i-hypodynamia ne-hypokinesia.
Izinkomba zokuzikhandla ngokomzimba zingahle zenziwe kubo bonke abantu abafisa ukuhola indlela yokuphila enempilo nokwandisa isikhathi eside sabo sokudala ngalezi zindleko. Kodwa-ke, akufanele kukhohliwe ukuthi kukhona nokuphikisana komuntu ngamunye okwenyuka ukucindezeleka emzimbeni.
Ukuzikhethela nokuzimisela ukuya emagumbini wokuqina akuwanele ukuqala ukuqeqeshwa. Iqiniso liwukuthi ezinye izifo zingabangela ukuphikiswa komuntu ngamunye ekuzikhandla ngokomzimba. Abantu abanempilo enhle esikhathini sethu akulona okuningi. Uma unesifo esithile, ngokokuqala, kufanele uqaphele kakhulu izincomo zodokotela ngesikhathi sokubonisana kokuqala. Njengoba izifo eziyisisekelo sokuphikisana nokuzikhandla ngokomzimba, zihlanganisa izinhliziyo nezinkinga zesimiso senhliziyo, ukucindezeleka komzimba, ukuguqulwa kwamuva noma izifo ezithathelwanayo, i-anemia. Kodwa-ke, ngisho noma odokotela beluleka ukuba ungangeni ekuqeqeshweni ngemisebenzi ejulile yomzimba, ngokuqinisekile bayokweluleka ukuhlinzeka ngemishini yokusebenza yenyama, okungenani ngendlela yokuphambana. Into esemqoka ngesikhathi esisodwa ukulungisa kahle umthwalo nokulawula njalo isimo sakho sempilo, ukuze ukuvivinya umzimba kulethe izinzuzo zezempilo kuphela.
Ukulahlekelwa isisindo ngokudla okunempilo efanele
Ungadla kanjani ukulahlekelwa isisindo futhi ubheke omncane?
Indlela yokulahlekelwa isisindo kahle ngosizo lwe-yoga?
Ukulahlekelwa kwesisindo nokuhlanzwa komzimba
Ukudla kwe-English: incazelo, imenyu ngosuku, zokupheka
Isiyinkimbinkimbi sokuzivocavoca nge-yoga
Izitshalo eziwusizo nezimbali eziwusizo
Iziphi izinqubo zokuzithokozisa aziphephile?
I-Horoscope yamaGemini-abesifazane ngo-2016 - uthando nangonyaka wokuzalwa
Yini akufanele ibe sekhabethe lomuntu wesifazane of fashion ngemuva 30: Izinto TOP 5 okufanele ulahlwe!
Yini ewusizo emaqabungwini ommbila
U-Snack wokuqala wonyaka omusha woku-New Year 2
Ukuphila okuhlangene emqondweni wabantu
Usuku lokuqala nomfana: indlela yokuziphatha?
Ukuvuvukala nokubomvu nxazonke
Ikhekhe ngenyama nama-apula
Iresiphi ye-cocktail "I-passion papaya"
Ukwelashwa kwe-colic ezinganeni
I-cocktail ne-kumquat nekharenti